जापानमा नेपालीको गर्विलो पौरख : अफिसर देखि टिम लिडरसम्म सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी
काठमाडौ । छोटो समयमा नै जापानमा हज्जारौ नेपालीलाई प्रत्यक्ष सेवा पु्रयाएका दीपक मैनाली र सोभानसिंह खडकालाई यतिवेला कामको चटारो छ । जापानमा केहीलाई नयाँ कोठा सर्नुपरयो भन्दै त केही नयाँ आईफोन मोवाईल लिन दिनमै दर्जनौ फोन आउँछ ।
जापान भर्खरै प्रवेश गरेका नयाँ नेपाली वा लामो समय देखि रहदै आएकाहरुलाई कुनैपनि समस्या परेमा दुवैको मोवाईलमा घण्टी बज्न थालीहाल्छ । जापानमा पहिलो पटक आएकाहरुले त उनीहरुलाई नभेटेका विरलै होलान । उनीहरुको कार्यालयमै पुगेर समस्या राख्नेहरु पनि धेरै छन ।
टोकियो स्थित एक जापानी कम्पनीमा कार्यरत मैनाली र खडकाको दैनिकी यतिमा मात्र सिमित छैन । जापान आउन चाहने नयाँ विद्यार्थीको डकुुमेन्ट तयारी, रेमिटान्स तथा ईन्टरनेट सम्बन्धि काममा विहान देखी साझँसम्म सेवा गर्दै दिन वित्छ । अझै कम्पनीले मोवाईल सेवा समेत शुरु भएयता उनीहरुलाई कामको जिम्मेवारी पनि बढदै गएको छ ।
तर जति वढी जिम्मेवारी भएपनि आफनो काम भएकाले सवैतिर भ्याउनै पर्ने बाध्यता छ । जापानमा व्यवसायीक कम्पनीहरुको व्यवसायिक दायरा सिमित भएपनि कामको दवावले निक्कै सताएको हुन्छ । तरपनि दुईभाईको कामको अगाडी जस्तै समस्या पनि समाधान भई छाडछ ।
पहिलो वर्षमै एक नम्वरमा नेपाली समुह
कम्पनीमा काम गर्ने उनीहरु दुुईभाईहरु मात्र होइनन । उत्तिकै दक्ष र काममा खटिने चिनियाँ, भियतनामी, थाई, मंगोलियन, ताईवानी फिलिपिन्सका कर्मचारी पनि उत्तिकै सक्षम र दक्ष पनि छन । तर सन् २०१४ मा नै कुल काम तथा हिसावमा नेपाली समुह एक नम्वर हुन सफल भयो ।
‘नेपालीहरुले हामीलाई काममा गर्नुभएको विश्वासले हामी कम्पनीमा एक नम्वर भयौ ।’ नेपाली समुहका लिडर पूर्वी नेपालको पाँचथर घरभएका दिपक मैनालीले बताए । नेपालीलाई हाम्रो काममा विश्वास भएकाले हामीले कम्पनीमा राम्रो काम गर्न सक्यौ । नेपालीहरुले गर्नुभएको मायाले हामी एक नम्वरमा पुग्यौ, मैनालीले बताए । जुन रेकर्ड यसअघि चाईनिज समुहसंग थियो ।
टोकियोको उएनो पार्क नजिकै रहेको ईष्टवृज कम्पनी जापानको एक यस्तो कम्पनी हो जसका प्रमुख ग्राहक विदेशी मात्र हुन । एसियालाई जोडने पुल वन्ने योजना सहित स्थापना भएको कम्पनीको सफलता त्यतिलामो छैन । तर, पछिल्ला केही वर्षमा भएको कामको मुल्याकंन आधारमा जापानी प्रतिष्ठित कम्पनी माझ विश्वासिलो कम्पनी भएको छ ।
सन् २०१४ मा कम्पनीले ‘सफटव्याकं’ मोवाईल कम्पनीको समग्रमा टपटेनमा पर्दै विदेशी ग्राहक धेरै वनाउनेमा पहिलो भयो । जसले कम्पनी पनि प्रतिष्ठित र सक्षम वन्दै गएको छ । कम्पनीका संचालक मध्येका एक साईतो सोईची नेपालीहरु काममा निक्कै धैर्यवान र ईमान्दार भएकाले कम्पनी स्थापित भएको बताए । ईष्टवृजका हालमा प्रमुख संचालक मध्येका एक उनले नेपालीहरु समग्रमा पहिलो र सक्षम समुह रहेको बताए ।
ईष्टवृज कम्पनी जापान तथा पूर्वी एसियामा काम गर्ने योजना सहित स्थापना भएकाले शुरु देखिनै आईटी क्षेत्रमा केही नेपालीलाई प्राविधिक रुपमा काममा प्रवेश गरायो । यस मध्ये सोभान सिंह खडका पनि शुरुमा डाटा म्यानेज अफिसरका रुपमा तल्लो पदमा काम शुरु गरेका हुन । हुदै कम्पनीले नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर नयाँ काम शुरु गर्दा केही महिना चामल लगायतका घरायासी सामान पनि विक्रि वितरण गरेको उनीसंग अनुभव छ ।
सस्तो चामल संगैका भियतनामी, थाई, ईण्डोनेसियन र वंगालीहरुले धेरै रुचाए र धेरैले बोराका बोरा मगाए पनि नेपालीहरुले रुचाएनन जसले हामीलाई नयाँ काममा डोहो्यायो ।
कम्पनीले शुरुका वर्षहरुमा विभिन्न क्षेत्रमा एजेन्सीका रुपमा मात्र काम गरेको भए पनि हाल कम्पनीले आफनै लगानीमा रेमिटयान्स र मोवाईल सेवा शुरु गरेको छ ।
एसविआई रेमिट कम्पनीसंगको अनुवन्धनमा ईष्टवृजले एसविआई रेमिटयान्स सेवा भर्खरै मात्र शुरु गरेको हो । नीजि लगानीमा ‘ईवी मोवाईल’ सेवा समेत भर्खरै शुरु गरेको छ ।
तीन वर्ष देखि कम्पनीमा कार्यरत सोभानसिंह खडकाले धेरै उल्झनहरु व्यहोरेका थिए । ‘त्यसवेला मोवाईल पाउन पनि एक हप्ता पर्खनु पर्दथ्यो । प्रकृया झंझटिलो र अप्ठयारो पनि थियो । समयक्रमसंगै यो अवस्थामा सुधार आउदाँ हामीलाई काममा सजिलो भयो ’ खडकाले भने ।
मुख्य कार्यालय टोकियोमा रहेको कम्पनीले जापानको दश भन्दा वढी राज्य‘केन’मा प्रत्यक्ष सेवा पु्याउदै आएको छ । खडकाले त्यो वेला धेरै नेपालीको छोटो समयको सेवा लिदै काम गरेपनि एक वर्ष अघिबाट दीपक मैनालीको प्रवेशसंगै काममा धेरै फड्को मार्न सकियो । काम प्रारम्भ भएको शुरुका केही महिना मैनालीले सघर्षमै समय विताए । तर कामको चाप जति भए पनि धैर्यसाथ समस्या सामधान गरे, जसले नतिजा सकारात्मक र उत्कृष्ठ हुदै गए । जसले मैनालीलाई पनि वर्षका उत्कृष्ट कर्मचारी सहित नगद पुरस्कार नै दिलायो ।
२०१४को जनवरी पहिलो हप्ताबाट पूर्णकालिन कर्मचारी भएका मैनालीले छ महिनामा नै उत्कृष्ट नतिजा निकाले । ‘टोकियोसंगै साईतामा, चिवा, खानागावा, आचि, फुकओका, सेन्दाई, ईवाराकी लगायतका क्षेत्रमा हामीले विशेष योजनाबद्ध काम गर्यौँ जसले हामीलाई एक नम्वर बन्न सहयोग ग्यो’ मैनालीले सुनाए।
खडका र मैनालीसंगै काम गर्दै आएका बुटवलका हिमाल पन्थी पनि उनीहरुका सहकर्मी हुन । पन्थीले पनि यी दुई भाईले जस्तै नेपाली अनि वंगलादेशी, श्रीलंकन लगायतका जापनामा रहदै आएका विदेशीलाई आफनो सेवा पु्याएका छन । पन्थी भन्छन,‘मिलेर काम गर्ने भएकाले नेपालीलाई कसैले जित्न सक्दैन ।’
नेपाली भएर नेपालीलाई काममा सहयोग गर्दा केही अप्ठयारो अनुभव भएपनि अधिकांस काममा सहयोग नै पाएका छौ । केहीले नबुझेका कारणमात्र अप्ठयारो भएको गुनासो सुनाए पनि हामीले तुरुन्त समाधान गरायौ, पन्थीले भने ।
पूवी नेपालको पाँचथर घर भएका दिपक मैनालीले पनि जापान आउदाँ साहै दुख पाएका थिए । आठ वर्ष अघि जापान आउदाँ कहीपनि नेपाली भेटिदैनथे । केही काम लिनुपर्यो भने भाषा नबुझेर त्यसै फर्कनु सिवाय अन्य कुनै विकल्प थिएन ।
आज यो अवस्थामा नेपालीले दुख पाउने र अलमलिने अवस्था घटेको छ । पछिल्लो दिनमा कुनै पनि सहयोग चाहिए र सुझावका लागि हामीलाई खवर आउछ,सकेकोसम्म सहयोग गदै आएकाछौ । मैनाली कम्पनीमा एक वर्षे कार्यकालमा सवैलाई जितेर उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार पाएकोमा दंग छन । पुरस्कारसंगै पछिल्लो वर्षसम्म समुह लिडर उपाधी सहित कम्पनीले सम्मान दिएको छ । पछिल्ला वर्ष पनि उनीहरु दुवैले हजारौ नेपालीहरुलाई भेटेर काम गर्ने योजना बनाएका बनाए ।
नौ वर्ष अघि जापान प्रवेश गरेका दाङका सोभान सिंह खडका पनि एक दशक संघर्समै वित्यो । एउटा काममा सफलता पाँउन पनि एक हप्ता लाग्ने गरेको समय पार गर्दै आएका उनी ईन्जीनियरिङका विद्यार्थी हुन ।
कामको शिलशिलामा कयौ रात रेल स्टेशनमा नै विताएर होस वा जस्तो सुकै समस्यामा परेर होस जापानमा नेपालीको समस्यालालाई आफनै समस्या संझेर फत्ते नगरी कहिल्यै बसिएन जसले हामीलाई अहिले बचाएको छ, खडकाले बताए ।
कम्पनीले सम्मान दिएको त्यो क्षण
कम्पनीले भर्खरै दिएको वार्षिक तथ्याकंमा चीनिया, भियतनामी, थाई, फिलीपिन तथा वंगलादेशको समुह मध्ये पहिलो र सक्षम समुह नेपाली समुह भनी घोषणा गरेको क्षण मैनाली र खडकाको परिक्षामा पास भए भन्दा पनि ईज्जत पाएको अनुभव गरे । अझ काम प्रारम्भ गरेको एक वर्षमै कम्पनीमा सवैभन्दा वढी काम देखाउदै नेपाली टिमको लिडर बन्ने मौका पाएकोमा मैनाली दंग छन । स्थायी कर्मचारीका रुपमा काम शुरु गरेको एक वर्षमै सफलता पाएको अनिभूति भयो, मैनाली बताउछन ।
कम्पनीमा नेपाली समुह उत्कृष्ठ हुदै यस वर्ष विदेश भ्रमणमा समेत लैजाने योजनाले उनीहरुलाई थप उर्जा मिलेको छ खडका त्यो बेला बताउँथे । हामीले गरेको कामले कम्पनी पनि स्थापित भएको छ । व्यक्ति स्थापित हुनुभन्दा संस्था स्थापित भएमा थप नेपालीले नयाँ काम पाउनेमा विश्वस्त रहेको खडकाले बताए ।
अष्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ ? यी उत्कृष्ट १० जीवन वीमा रोज्नुहोस् : जीवन सुखी, खुशी र सुरक्षित पक्का
दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ या जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले जान्नैपर्ने कुरा
अस्ट्रेलियामा यस्तो गम्भीर अभियोगमा प्रवीण मैनाली अदालतद्धारा दोषी ठहर, कस्तो भयो सजाय ?
जापानबाट आउँदा-जाँदा हवाई टिकट किन्ने बेला यी कुरामा ध्यान दिनुस्
कोरियामा रहेका नेपालीले पन्ध्र हजार सर्जिकल मास्क सहयोग गरे